किन गएनन् राजदूत प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा ? Globe Nepal News Portal
किन गएनन् राजदूत प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा ?
विभागीय मन्त्रीसँग बोलचालसमेत बन्द,घर बेच्ने दाउमा राजदूत
न्यूयोर्क,सेप्टेम्वर २० । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा न्यूयोर्कको स्थानीय समय अनुसार विहान ९ वजेर ३० मिनेट जाँदा जोन एफ केनेडी विमानस्थलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै ईत्तेहाद एयरलाईन्सवाट उत्रिए । उनको स्वागतार्थ राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई, महावाणिज्यदूत मधुकुमार मरासिनी लगायत नियोगका अधिकारीहरु उपस्थित थिए । तर अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्की भने कतै देखिएनन् । त्यसै वीचमा कसैले प्रश्न ग-यो, प्रधानमन्त्री अमेरिका आउनु भएको वेलामा राजदूत नेपाल जानु भएछ कि क्या हो ?
सवैले मुखामुख गरे तर त्यसको जवाफ कसैले पनि दिएन । राजदूत कार्की उपप्रधानमन्त्री एवं आफ्नो विभागीय मन्त्री कृष्णवहादुर महरा न्यूयोर्क आउँदा पनि उपस्थित भएका थिएनन् । महरालाई स्वागत गर्न मधुकुमार मरासिनी मात्र पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको वेला राजदूत विमानस्थलमा नपुग्नु कूटनीतिक वृत्तमा समेत चासोको विषय बनेको छ । सामान्यतया : कुनै पनि देशमा आफ्नो देशको सरकार प्रमुख ट्रान्जिटमा जाँदा समेत सोही देशको राजदूतले स्वागत गर्ने प्रधानमन्त्री या सरकार प्रमुख ट्रान्जिटमा वस्दा विशेष केयर गर्ने कूटनीतिक प्रचलन नै हो । तर राजदूत कार्की भने राष्ट्र संघको कार्यक्रममा आफू वेखवर भएको भनेर सामान्य कूटनीतिक धर्म समेत निर्वाह नगरेर नेपालको ईज्जतमाथि नै खेलवाड गरेका छन् ।
महरा राजदूत बोलचाल नै छैन
डिसीस्थित दूतावास निकट स्रोतका अनुसार यसपटक उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णवहादुर महरा र राजदूत कार्की वीच टेलिफोन सम्वाद पनि भएको छैन । यसले गर्दा राजदूत कार्की तनावमा रहेका छन् । उनले कसैलाई केही नभने पनि अस्वस्थ्य भएको भन्दै फोन समेत रिसिभ नगर्ने गरेको वताईन्छ । समाचार स्रोत भन्छ – अनौपचारिक रुपमा महराका विभिन्न निकटवर्तीहरुले राजदूत कार्कीलाई काम नगर्न भनिसकेका छन् । तर राजदूत कार्की भने आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
स्मरणीय छ, यस अगाडि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत न्यूयोर्कमा महासभामा भाग लिन आउँदा राजदूत कार्की अघि पछि लागेका थिए ।
राजदूतको दाऊ घर बेच्ने
यसैवीच राजदूत निकट स्रोत भन्छ, यस अगाडि एमसिसिको हस्ताक्षर गर्न आईपुगेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई यस्ता एमसिसि दुई चारवटा गर्न सकिन्छ, दूतावासमा वजेट र कर्मचारी थप्नु परयो भनेका थिए । त्यसमा कार्कीले केही जवाफ दिएनन् । साथै राजदूत कार्कीले राजदूतको निवासस्थान रहेको स्थान सानो भएको र नेपालवाट पाहुना,प्रतिनिधि आउँदा समेत राख्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री कार्कीलाई निवासस्थान वेचेर अर्को अलि फराकिलो स्थानमा किन्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मार्फत प्रक्रिया पुरयाएर ल्याउन र आवश्यकता महसुस भएको खण्डमा विचार गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । तर परराष्ट्रमन्त्री कृष्णवहादुर महराले भने राजदूतको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेको स्रोतको दावी रहेको छ ।